Binance बर्मुडा गुप्त कार्यक्रम परिणत निवेश $ 10M - Blockchain समाचार
अप्रिल 28, 2018 व्यवस्थापक
Binance अर्को केही महिना भन्दा बढी बर्मुडा मा आफ्नो नयाँ वैश्विक अनुपालन केन्द्र स्थापित गर्न योजना, प्रिमियर दाऊदले बर्ट घोषणा गरेको छ.
शुक्रबार एक संयुक्त प्रेस सम्मेलन मा बोल्दै, बर्ट समझ को एक ज्ञापन पत्र हस्ताक्षर गरिएको घोषणा, जो अन्तर्गत Binance दान फाउंडेशन गर्नेछन् $10 लाख प्रविधी सम्बन्धित शैक्षिक कार्यक्रम तिर. थप $5 लाख blockchain स्टार्टअपहरू मा निवेश गरिनेछ.
कि माथि, Binance को बर्मुडा सरकार cryptocurrencies र blockchain लागि नियामक रूपरेखा विकास गर्न मद्दत गर्नेछ, साथै देशमा स्थापित नयाँ कार्यालय.
Bitcoin स्वीकार गर्न आयरल्याण्ड मा ठूलो homebuilder
अघिल्लो पोस्ट:दक्षिण कोरियाली वित्त मन्त्री: गुप्त फिएट प्रणाली खतरनाक
अर्को पोस्ट:सेन्ट. लुइस फेडरल रिजर्व: Bitcoin नियमित मुद्रा जस्तै छ
सक्छ 16, 2018 मा 8:01 PM